Kube muncu ehlelwa yingozi eyoshada - Ilanga News
Home Izindaba Kube muncu ehlelwa yingozi eyoshada
Kube muncu ehlelwa yingozi eyoshada
NGUMNU Thulani Gumede nendodakazi yakhe uNkk Nontobeko Masoka, uMaGumede.
Ngakwesokudla uMnu Swenkile Masoka obegcagcelwa.
KUCISHE kwabhuntsha umshado umakoti nezimpelesi zakhe bebandakanyeka engozini yemoto izolo ngeSonto ekuseni besendleleni ebheke kubo komyeni, bagcina bephuthunyiswa esibhedlela, okuphoqe ukuba umshado uqale sekuntambama umakoti esebuya esibhedlela ekhonkwe umqala, izimpelesi zigodle izingalo.
UNkk Nontobeko Masoka, uMaGumede (29) waseHluhluwe, wehlelwa yileli shwa nje, ubeyobopha elikasofasilahlane nomyeni wakhe, uMnu Swenkile Masoka (40).
ILANGA lizifikele mathupha kulo mshado. Ibhokisi lomshado lingene esigcawini selihlukene ngenxa yokulimala ngesikhathi kwenzeka ingozi.
Ekhuluma naleli phephandaba uyise kamakoti, uMnu Thulani Gumede, uveze ukuthi ingozi yenzeke ngezithuba zabo-03h00, ngesikhathi indodakazi yakhe nezimpelesi bebheke oShwashweni, kwesaKwaMthethwa, eMpangeni kubo komyeni.
“Besilungiselela ukuphuma sibalandele ngesikhathi ngithola ucingo lusibikela ukuthi indodakazi yami isibe sengozini yemoto yaphuthunyiswa esibhedlela nabakhaphi bayo. UNkulunkulu emuhle, kayilimalanga kakhulu ngoba ibuyile esibhedlela umshado waqhubeka yize ibilimele injalo,” kusho uMnu Gumede.
Udadewabo kaNkk Masoka, uNkz Fikile Gumede naye obesemotweni yengozi, uthe: “Siphume ekhaya ngabo-3 ekuseni siphuthuma ukuthi sifike ekuseni ilanga lingakaphumi ukuze umakoti ezokhomba inxeba.
“Kuwusiko ukuthi umakoti afike ekuseni. Kuthe sisendleleni sesidlula eMfekayi, eMtubatuba, sezwa kuqhuma isondo umshayeli wemoto wahluleka wukuyibamba, yaphaphalaza.
“Umakoti nezimpelesi zakhe yibona abathintekile. Ulimale emqaleni nasemgogodleni. Sibonga uMdali osihlengile kwangaphuma umphefumulo kule ngozi.
“Umakoti uphuthunyiswe esibhedlela wamelwa ngudadewabo omncane ngesikhathi umthimba ufika kwamkhwenyana, kwaba nguyena ongena emzini egubuzele ngengubo, kwazise umshado kawuhlehli. Umakoti uphume esibhedlela waqhubeka nomshado wakhe,” kusho uNkz Gumede.
Inkomo yomshado iwe egcekeni umakoti esefikile, wakwazi ukuzikhombela inxeba. Imizamo yokuxoxa naye iphunzile ngenxa yokuthi isimo abekusona besingesihle.
UMnu Masoka uthe ubonga ukuthi umshado wabo ugcine uqhubeke ngempumelelo yize isimo siqale sabasibi ekuseni.
“Akukho okuningi engingakusho ngaphandle kokuthi ngijabule ngoba umshado wethu ugcine uqhubekile kahle,” kusho yena.
Previous articleOTHISHA ECALENI LOKUBULALA ABEBEMSOLA NGOKWEBA I-RICE NAMAFUTHA
Next articleI-Sadtu neCosas baya enkantolo ngoluka-matric